နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းလား၊ ဘာမှ မရှိခြင်းလား | The Noble Eightfold Path
မေး။ ။ ဆရာတော်ဘုရား … တပည့်တော် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားပါသည်။
ဆိုလိုတာက ဆင်းရဲမရှိခြင်းဆိုတဲ့ အငြိမ်းဓာတ်ကြီးဟာ တည်ရာဌာန မရှိပါဘူး။ ဒီ သဘာဝကြီးဟာ အကြောင်း တစုံတရာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ (သင်္ခတ)သဘာဝ မဟုတ်ပါဘူး။
တိုတိုရှင်းရှင်း ပြောရရင် “အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ တရားဟာ သင်္ခတတရား”ပါပဲ။
ရုပ်နဲ့နာမ်ကို သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာမို့ ‘သင်္ခတတရား’လို့ ခေါ်ရပါတယ်။
သို့သော်လည်း အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ‘အဖြစ်တရား’များမို့ သူတို့ဟာ ပျက်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ပျက်သလဲဆိုတာ့ ဖြစ်လို့ ပျက်တာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ‘သင်္ခတနယ်’ ဟာ ဖြစ်ပျက်နယ်ပါ။
တိုတိုရှင်းရှင်း ပြောရရင် “အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်တရား မဟုတ်ဘူး”လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
ဒီ ဆင်းရဲငြိမ်းနေတဲ့ ဆင်းရဲကင်းနေတဲ့ သဘာဝဟာ မူလကတည်းက ရှိနေတဲ့ အရှိသဘာဝမို့ သူဟာ အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်တာ မဟုတ်လို့ သူ့ကို အသင်္ခတလို့ ခေါ်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသင်္ခတနယ်လို့ ခေါ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ဟာ ဖြစ်ပျက်နယ်ကို လွန်မြောက်နေပြီဖြစ်လို့ ဆင်းရဲမရှိဘဲ ဆင်းရဲငြိမ်းနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ် ပါဠိတော် (စာ-၁၅) မှာလည်း –
“ဥပ္ပါဒေါ – အဖြစ်တရားသည်၊
သင်္ခါရာ – ရုပ်နာမ်သင်္ခါရတို့ပေတည်း။
အနုပ္ပါဒေါ – မဖြစ်တရား (အရှိတရား)သည်၊
နိဗ္ဗာနံ – နိဗ္ဗာန်ပေတည်း။” လို့ အဖြစ်တရားနဲ့ အရှိတရားကို ခွဲခြား မိန့်တော်မူခဲ့တာပါပဲ။
ဒါကြောင့် အပတိဋ္ဌ = တည်ရာဌာန မရှိတဲ့ တရား၊ ကာလဝိမုတ္တ = အတိတ် အနာဂတ် ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလမှ လွတ်တဲ့ တရားပါ။ ( Nibbanna is beyond time and space. )
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ စတဲ့ တရားတွေဟာ သတ္တဝါကို ပူလောင်စေတဲ့ တရား၊ ဆင်းရဲစေတဲ့ တရားတွေပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ကိလေသာလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိလေသာငြိမ်းခြင်းဟာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်း = နိဗ္ဗာန်ပါပဲ။
အဲဒီအတိုင်းပဲ ဆင်းရဲမရှိတဲ့ သဘာဝကြီးဟာလည်း အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အဖြစ်တရား (သင်္ခတ) မဟုတ်။ မူလကတည်းက ရှိနေတဲ့ အရှိတရား (အသင်္ခတ)ပဲ။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ယာဉ်ရထားကို လမ်းဆုံးအောင် စီးသွားနိုင်တဲ့ လူကတော့ လမ်းဆုံးရင် အသင်္ခတ သဘာဝ အငြိမ်းဓာတ်ကို ဆိုက်ရောက်သွားမှာပဲ။
တကယ်လို့သာ နိဗ္ဗာန်ဟာ အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် ဖြစ်တဲ့ သဘာဝဆိုရင် ပျက်ရတာ ဓမ္မတာဖြစ်လို့ နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း ပျက်တယ်လို့ ဆိုရာ ရောက်ပေလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် “ဓုဝံ = အမြဲရှိနေတဲ့ သဘော”လို့ ဆိုရပါတယ်။ ပြီးတော့ မဖြစ်တဲ့ သဘာဝမို့ သူ့ကို ဖြစ်ပေါ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ အကြောင်းတရားလည်း မရှိဘူး။
ဒါကြောင့် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဟာ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ အကြောင်းတရားဆိုတာလည်း မှန်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ပွားခြင်းက ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ပွားခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့ ဆင်းရဲမရှိတဲ့ သဘာဝကို ဆိုက်ရောက်သွားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နိဗ္ဗာန်ကို ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်း မရှိလို့ နိဗ္ဗာန်ဟာ အဖြစ်တရား (သင်္ခတ) မဟုတ်။
ဒါကြောင့် ဓုဝံ = အမြဲ ရှိနေတဲ့ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်း သဘာဝကြီးပါ။
မှန်ပါတယ်။ တစုံတရာကို လိုချင်ရင် ဆင်းရဲတော့တာပဲ။ ငွေလိုချင်ရင် ငွေလိုချင်စိတ်ကြောင့် ဆင်းရဲတယ်။ ကားလိုချင်ရင် ကားလိုချင်စိတ်ကြောင့် ဆင်းရဲတယ်။ အဝတ်အစား တစုံတခုကို တပ်မက်ရင်လည်း အဲဒီ တပ်မက်စိတ်ကြောင့် ဆင်းရဲတယ်။ သူဌေးသူကြွယ်စတဲ့ ဘဝကောင်း ဘဝမွန်တွေကို လိုချင်ရင်လည်း အဲဒီလိုချင်စိတ်ကြောင့် ဆင်းရဲတယ်။
ဒါကြောင့် ရုပ်နာမ်ခန္ဓာဆင်းရဲ ငြိမ်းချင်ရင် အကြောင်းဖြစ်တဲ့ လိုချင် တပ်မက် နှစ်သက် တွယ်တာမှု တဏှာလောဘကို ပယ်သတ်မှပဲ ဆင်းရဲငြိမ်းနိုင်မယ်။
ရုပ်အသစ် နာမ်အသစ်နဲ့ ဘဝသစ်တစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း ဘဝဖြစ်ချင်တဲ့ တဏှာလောဘကြောင့် ဖြစ်တာပဲ။
ကဲ မေးရဦးမယ်။ ဒီပရိသတ်ထဲ ဘယ်သူ သေချင်သလဲ။
“အမယ်လေး … ဆရာတော်၊ မကြာခင်က ၁၀-တန်း စာမေးပွဲကျကြတုန်းကလေ သေချင်တဲ့လူတွေ အများကြီး ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ တားထားရတယ်” လို့။
ဒီတော့ တစုံတခုသော အဆင်မပြေမှုကြောင့် သေချင်တယ်ဆိုတဲ့ အဲဒီလူတွေ တကယ် သေချင်သလားဆိုတော့ အဲဒီဆင်းရဲနဲ့ တွေ့တဲ့ ကြုံတဲ့ အခိုက်မှာတော့ သေချင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် ‘ဒီလိုဆိုရင် ကြိုးဆွဲချ သေမယ်’ဆိုပြီး ကြိုးကွင်းစွပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဘယ့်နှယ် … သူ သေချင်စိတ် ရှိပါဦးမလား။
အဲဒီ ရှင်ချင်စိတ်ကြောင့် နောက်ဘဝအသစ် ရုပ်အသစ် နာမ်အသစ် ဆိုတဲ့ ရှင်မှု ဖြစ်ရတာ။
ဝတ်ချင်စိတ်ကြောင့် ဝတ်ရတယ်၊ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။
အသက်ရှင်ချင်စိတ်ကြောင့် ရှင်ရတယ်ဆိုတာ အဲဒါကိုပဲ စကားလုံးထွားထွားနဲ့ ပြောရရင် “ဘဝတဏှာကြောင့် ဘဝတစ်ခု ဖြစ်ရတယ်”လို့ ပြောရတယ်။
ဒုက္ခသစ္စာ။ အဲဒီတော့ သမုဒယသစ္စာကြောင့် ဒုက္ခဖြစ်တယ်။
သူ့ကြောင့်ပဲ လိုချင် တပ်မက် နှစ်သက်တဲ့ တဏှာတွေ ဖြစ်တယ်။
“ဒီလိုဆို မအောင်ချင်ရဘူးလား ဘုရား”လို့ မေးရင် …
သူ့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ဆင်းရဲမှန်သမျှ ရုပ်ဒုက္ခ နာမ်ဒုက္ခ အပါအဝင် လောကမှာ တွေ့ရတဲ့ ဒုက္ခမှန်သမျှဟာ ဒုက္ခသစ္စာ = ဆင်းရဲအမှန်တွေပဲ။
ဒါဖြင့်ရင် အဲဒီဆင်းရဲတွေ ဘယ်အခါ ငြိမ်းမလဲ။
သေချာတယ်နော်။ တဏှာတစ်ခု မရှိရင် အဲဒီ တဏှာကြောင့် ဖြစ်မယ့် ဆင်းရဲတစ်ခု ငြိမ်းတာပဲ။
ကိုင်း … မေးမယ်။
အမယ် … မရယ်နဲ့လေ။ ဟုတ်တာ ပြောတာ။
ဆိုကြပါစို့။ ဒီမှာ မီးတောက်နေတယ်။ မီးပုံကြီး မီးတောက်နေတဲ့အခါကျတော့ “ဟဲ့ … မီးတွေ တောက်နေတယ်။ ငြိမ်းလိုက်စမ်း”လို့ ခိုင်းတော့၊ ငြိမ်းပစ်လိုက်တယ်။ ဘာရှိသေးသလဲ။
ဒီတော့ “ဒီလိုဆိုရင် ဘုရား၊ ဘာမှ မရှိတာကြီး လို့ တပည့်တော်တို့ မြင်နေပါတယ်။ မလိုချင်ပါဘူး”လို့များ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်မိရင် ဒီလို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ကိုင်း … ဘယ်မှာ ရှိတယ်လို့ ပြောရမလဲ။
နောက်ပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်နှင့် ပတ်သက်လို့ “ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန် ဝင်စံတော်မူသည်”လို့ သုံးနှုန်းတဲ့ အရာမှာလည်း တင်စားမှုပါပဲ။
(ဤနေရာ၌ ‘နာမ်ဓာတ်လည်း မဟုတ်ဘူး’ဆိုသည်မှာ ‘စိတ်, စေတသိက်တို့ကဲ့သို့ အာရုံသို့ ညွတ်တတ်သော နာမ်မဟုတ်’ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ‘မိမိသို့ အာရမ္မဏိကတရားတို့ကို ညွတ်စေတတ်သောကြောင့် နာမ်မည်၏’ဟူသော ဝစနတ္ထအရမူ နိဗ္ဗာန်ကို နာမ်တရား၌ သွင်းယူရပါသည်။)
ကဲ … ဒါလောက်ဆိုရင် နိဗ္ဗာန်မေးခွန်းရဲ့ အဖြေ တော်သင့်လောက်ပါပြီ။
This entry was posted on October 24, 2011 by Noble Kyaw. It was filed under ဓမ္မအတွေး၊ဓမ္မအမေး .
Very good, there is still hope for peace to prevail in Myanmar. The values and norms of the Burmese character and life is always conditioned by the Four Noble Truths. Keep up the good work
အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်။ တရားစားသာများက တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ ဘာနဲ့မှ လဲယူလို့မရတဲ့တရားပါ။